Aostrôneziana (vahoaka) - Wikipedia
Ny Aostrôneziana dia ireo vahoaka tompon' ny fianakaviam-piteny aostrôneziana ka ny ankamaroany dia miteny malaiô-pôlineziana (na nosantariana). Ny fiteny malaiô-pôlineziana dia ahitana fiteny miisa 1 248 raha mitotaly 1 268 ny fiteny aôstroneziana. Ny anarana hoe aostrônezia, izay avy amin' ny teny latina hoe auster (midika hoe "rivotra atsimo") sy ny teny grika hoe νῆσος / nêsos (izay midika hoe "nosy") dia midika ara-bakiteny hoe "nosin' ny rivotra atsimo".
1 Faritra misy ny Aostrôneziana
2 Fipoiran' ny mpiteny aostrôneziana sy fielezany
3 Fitaterana an-dranomasina
4 Ny fiteny aostrôneaziana
Faritra misy ny AostrônezianaHanova
Faritra misy ny Aostrôneziana sy fifindrà-monina sy fifampikasohana mety hitranga any aoriana (Blench,2009)
Ny ankamaroan' ny mponin' ireo nosy any Azia Atsimo Atsinanana (Indônezia sy Filipina ary Malezia) dia miteny aostrôneziana. Ahitana vahoaka aostrôneziana vitsy anisa ny any Birmania, Kambôjy, Sina (ao amin' ny nosy Hainan), Taioàna, Tailandy, ary Vietinamy. Any atsinanana kokoa, any amin' ny morontsiraka sasany ao Papoazia-Ginea-Vaovao sy manerana an' i Ôseania, afa-tsy i Aostralia, dia ahitana Aostrôneziana. Aty andrefana, eto Madagasikara sy ao Maiôty, dia miteny aostrôneziana (ny fiteny malagasy sy ny fiteny kibosy). Ny mpiteny aostrôneziana dia miely amin' ny veleran-tany hatraty Madagasikara aty andrefana ka hatrany amin' ny Nosin' ny Paska (Nosin' ny Paka) any atsinanana, ary hatrany Taioana sy Haoay any avaratra ka hatrany Zelanda Vaovao any atsimo ny fiteny aostrôneziana.
Fipoiran' ny mpiteny aostrôneziana sy fielezanyHanova
Ny fandinihana ny foto-tarazo navoaka tamin'ny taona 2020 dia toa manambara fa ny fototra nipoiran' ny mpiteny aostrôneziana dia ireo vahoaka niaina tamin' ny vanimpotoana neôlitika tao amin' ny tapany atsimon' i Sina tokony ho tany amin' ny 8 400 taona tany aloha. Nisy koa fikarohana marolafy, izay nahitana ny arkeôlôjia sy ny etnôlôjia ary ny haifiteny, dia nahafahana nanombantombana ny fielezan' ireo fiteny aostrôneziana sy ny fomba fambolena. Tany amin' ny 5 000 taona lasa (taona 3000 tal. J.K.) dia nisy mponina amorontsiraka tany amin' ny tapany atsimon' i Sina, mpamboly ampemba sy vary, izay nanomboka niampita ny andilan-dranomasina mba hiorim-ponenana tao Taioàna. Tokony tamin' ny taona 2000 tal. J.K., ireo fiteny aostrôneziana sy izany teknika izany dia niely avy any Taioàna mankany Filipina, avy eo avy ao Filipina mankany Solaoesy sy Timôro ary avy ao nankany amin' ireo nosy hafa ao amin' ny tambanosin' i Indônezia. Tokony tamin' ny taona 1500 tal. J.K. dia nisy koa fielezana avy ao Filipina nankany Ginea Vaovao ary any ankoantr' izany, ao amin' ireo nosin' ny Ranomasimbe Pasifika. Farany, nanodidina ny taona 1 (fanombohan' ny fanisan-taona iraisana), dia nisy Aostrôneziana izay niorim-ponenana teto Madagasikara avy any Indônezia.
Na dia izany aza dia toa tsy manaporofo ny fisian' ny fifindrà-monina tsy maintsy tafaraka tamin' ny fielezan 'ny kolontsaina ny biôlôjia. Ny fikarohana momba ny krôzôma Y nataon' ny vondrona biôlôjista iray dia nanatsoaka hevitra fa ny tarazo avy amin-dray ao amin' ny ankamaroan' ny mponin' i Indônezia sy i Ôseania dia avy amin' ny mponina tamin' io faritra io efa hatramin' ny faramparan' ny pleistôsena, izany hoe efa mihoatra ny 10 000 taona, izany hoe talohan' ny fifindrà-monina aostrôneziana. Izany fikarohana izany dia naneho ny fifandraisana ara-tarazo eo amin' ny Indôneziana avy ao avaratra (Filipina sy Taioàna) amin' ny mponina mpamboly, izany hoe tamin' ny andron' ny neôlitika, sy taorian' ny taona 2000 tal. J.K. Araka izany fikarohana izany dia toa hoatry ny mponin' i Ôseania no nandray tamin' ny neôlitika ny fiteny sy ny teknikan' ny mponina avy any Filipina, nefa tsy midika izany fa niorim-ponenana tao amin' io fartra io ireo olona avy any Filipina ireo. Mety nisy anefa mponina avy any avaratra izay niorim-ponenana tao Indônezia izay mety nisy mponina vitsy kokoa tamin' ny neôlitika.
Nisy sora-tsokitra javaney sy lahatsoratra arabo izay maneho fa tamin' ny taonjato faha-9 dia nifandray ara-barotra tamin' ny Ranomasimbe Indiana sy ny morontsirak' i Afrika i Java sy ny faritra sasany ao Indônezia. Nisy kapiteny persana atao hoe Ibn Shahriyar, ao amin' ny bokiny atao hoe Kitab Ajaib al Hind ("Bokin' ny zava-mahagaga any India"), izay nitatitra ny fijoroana vavolombelona nataon' ny mpivarotra arabo iray atao hoe Ibn Lakis izay nahita ny fahatongavan' ny "lakana arivo any ho any" tamin' ny taona 945 tao amin' ny morontsirak' i Môzambika, niondranan' ny Waq-Waq izay avy any amin' ireo nosy "eo anoloan' i Sina" nitady entam-barotra sy andevo Zeng (izany hoe Zenj, anarana iantsoan' ny Arabo tamin' izany fotoana izany ny mponina ao amin' ny morontsirak' i Afrika).
Ny fiparitahana amin' ireo faritra lehibe toa an' i Mikrônezia sy i Melanezia ary i Pôlinezia, miaraka amin' ireo nosy izay matetika sarahan' ny elanelan-dranomasin-dalina anjato kilômetatra, dia azo hazavaina amin' ny nampiasana ny lakana misy "fanary" izay mety mahatratra ampolony metatra sady ahafaha mitondra fianakaviana sy biby fiompy. Azo inoana fa ny dingana nandalovan' ny fielezan' ny vahoaka aostrôneziana tao Filipina aloha sy Indônezia, avy eo tao amin' ny Ranomasimbe Pasifika sy Indiana, dia azo ampifandraisina amin' ny fivoaran' ny fitaovam-pitaterana sy ny teknikam-pifamoivoizana an-dranomasina: fivoaran' ny endriky ny lay sy ny lakana, famoronana ny fanary, sns).
Ny fiteny aostrôneazianaHanova
Fizaràna ny faritra itenenana ny fiteny aostrôneziana
Ny fiteny aostrôneziana dia ireo fiteny tenenin' ny vahoaka aostrôneziana: eto Madagasikara, any Azia Atsimo Andrefana, ao amin' ny ranomasimbe Pasifika ary any Taioàna. Vondrom-piteny faharoa ny fiteny aostrôneziana raha ny isan' ny fiteny no heverina (fiteny miisa 1 268), aorian' ireo fiteny nizerôkôngôley. Miisa roa ny zana-tsokajin' ny fiteny asotrôneziana: ny fiteny fôrmôzana, izay tenenina ao Taioàna, sy ny fiteny malaiô-pôlineziana any amin' ny toerana hafa ankoatr' i Taioàna. Ny nipoiran' ireo fiteny ireo dia tokony ho tao amin' ny tendrony atsimo atsinanan' i Sina na Fôrmôzy (Taioàna) izay mbola ahitana mponina miteny aostrôneziana. Ireo fiteny melaneziana, izay tokony ho isan' ny fiteny aostrôneziana, dia tsy nafangaron' ny mpahay fiteny noho ny antony ara-bolonkoditra.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Aostrôneziana_(vahoaka)&oldid=999936"
Dernière modification le 5 Janoary 2021, à 11:02
Voaova farany tamin'ny 5 Janoary 2021 amin'ny 11:02 ity pejy ity.